Ividiyo: Imakethe NjengoBeyonce (NSFW) | Martech Zone
Ividiyo: Imakethe NjengoBeyonce (NSFW)
NgoMgqibelo, Ephreli 27, 2013 ISonto, Ephreli 28, 2013 Douglas Karr
Qonda nje ukuthi le vidiyo inolimi oluthile olumibalabala. Uma usemsebenzini, kungadingeka ukuthi ufake amahedfoni. Lo ngumyalezo oqonde phambili oqonde phambili ovela ku- Gary Vaynerchuk. Ngiyawuthanda umyalezo wokuthi imithombo yezokuxhumana iyiqhinga lesikhathi eside futhi yilo izinkampani eziningi elihluleka ukuliqonda.
Ngihlala ngibatshela abantu ukuthi kufana ne-akhawunti yomhlalaphansi. Awulindelanga ukuthi ukhiphe imali ngemuva kwenyanga, kudinga izinyanga neminyaka yokutshala imali nokwakha umfutho. Le bhulogi yisibonelo esihle. Ngikhumbula kahle ngenkathi le bhulogi ishaya izivakashi ezingaphezu kwe-100 ngosuku. Manje, eminyakeni edlule sinezinsuku ezinezivakashi eziyizinkulungwane ezingama-7 noma eziyi-8. Ayikho imfihlo ekukhuleni… besilokhu sizama ukunikeza inani ngokuthunyelwe ngakunye futhi sishicilelwa ngokungaguquguquki nsuku zonke (isikhathi esiningi).
Ukumaketha kwakho kwe-Social Media kudinga Izithombe
Izimpendulo ziqala okuncamelayo kokusebenzisana
Ngo-Apr 28, i-2013 ku-1: 14 AM
Ngithanda umugqa wokugcina “Ayikho imfihlo ekukhuleni… besilokhu sizama ukunikeza inani ngokuthunyelwe ngakunye…” Ukunikeza inani ngokuthunyelwe ngakunye nakanjani kuzoshayela ithrafikhi futhi ngokujwayelekile kuzoholela kusu elihle lokumaketha!
Ngo-Apr 28, i-2013 ku-8: 03 AM
Ngiyabonga, Steve. Kunesikhathi lapho besigxila kakhulu kumagama angukhiye nobungako. Ngeke ngiphinde!
Kuthunyelwe kusuka ebhokisini leposi le-iPhone
Ngo-Apr 28, i-2013 ku-7: 34 AM
LMAO, Lokhu kwakumangalisa uDoug !! Amakhanda nje: "Manje, eminyakeni edlule sinezinsuku ezinezivakashi eziyizinkulungwane eziyisikhombisa noma eziyisishiyagalombili ngonyaka." unyaka = usuku lapha. [ngisanda kukubambela ihlumela!]
Ngo-Apr 28, i-2013 ku-8: 10 AM